Izakhiwo zokwelapha ze-ginger ukulahlekelwa isisindo
Impilo yabesifazane Amakomidi Abantu
I-Ginger - i-spice yasempumalanga, ethandwa kakhulu. Kodwa i-ginger ayiyona kuphela izipayisi, ezinika izitsha zokuzilibazisa, i-ginger - isitshalo somuthi. Izakhiwo zokuphulukisa i-ginger zihlaba umxhwele ngokuhluka kwayo. Futhi konke lokhu kuhlanganiswe esitshalweni esisodwa, noma kunalokho empandeni yalesi sitshalo.
Izakhiwo ze-ginger zokulahlekelwa isisindo
Ngaphezu kwalokho, i-ginger isetshenziselwa ukulahlekelwa isisindo. Odokotela baseMpumalanga bathola indawo ye-ginger - "phuza igazi." Okusho ukuthi, amalungiselelo okwenziwe ngesiginja, asakaze zonke izinqubo zamagciwane emzimbeni, ngenkathi ekhishwa ngamanzi amaningi kanye nama-slags amaseli.
Ngaphezu kwalokho, i-ginger inomphumela omuhle ohlelweni lokugaya, kusiza ukugaya ukudla.
Kufaka isandla ekutheni akukho-slag entsha eyakhiwa.
I-ginger inomphumela omncane we-laxative, okungabazeki ukuthi kubalulekile ukulahlekelwa isisindo kanye nempilo yonke, ngoba kusiza ukususa i-cholesterol emzimbeni. Isibonelo, uma uthatha umkhiqizo osuselwa kunjengejimi ngaphambi kokudla, khona-ke umzimba uzosusa ubuthi obuningi futhi ukudla kuzobekwa kahle. Iresiphi yalo mkhiqizo: i-ginger grate nge-grater enhle, thatha ithisipuni elilodwa, amaconsi amabili kalamula kalamula, usawoti omncane. Konke ukuxuba nokudla, akudingeki ukuthi uphuze.
I-Ginger yokulahlekelwa isisindo
I-ginger ingasiphuza izitsha ezahlukahlukene futhi ucabange ukuthi lokhu kuyindlela ethile. Kodwa-ke, noma yisiphi isenzo esiwusizo kuphela ohlelweni, isisombululo esithembeke kakhulu kunazo zonke nge-ginger kukhona iziphuzo ezisekelwe e-ginger. Lezi ziphuzo ziyasiza emzimbeni, zivuselela futhi zinambitha. Iziphuzo ezisekelwe ku-ginger ziphuthumisa imetabolism, zihlakaze izinqubo zangaphakathi, zikhulule amaseli we-toxin namafutha angaphezulu.
Izakhiwo zokwelapha i-ginger yokulahlekelwa isisindo: imithetho yokusetshenziswa kweziphuzo
Ngaphambi kokwenza iziphuzo, funda imithetho yokusetshenziswa kwazo.
Iziphuzo ezisekelwe ku-ginger zidla kangcono izikhathi ezintathu ngosuku.
Ngemuva kokuba ubambe inkambo yokuphuza isisindo sokulahlekelwa isisindo, ungakwazi ukuphuza i-ginger ngezinye izikhathi ukuze 'ukhunjulwe' ngomzimba futhi uqale ukusebenza ngokushesha.
Ungasebenzisa njalo i-ginger, uphuze itiye elivamile ngesikhumba esincane. Awu, uma ubeka elinye i-lobule lemon kulelo teyi.
Ungaphuzi itiye nge-ginger ngasekupheleni kwebusuku, ngoba inezindawo ezakhayo, awukwazi ukulala.
Ukuze uthole umphumela omuhle udinga ukuphuza ama-gramu angu-2 wetiyi le-ginger ngosuku, kodwa awudingi kusihlwa.
Ngokuba itiye le-ginger enempilo, okwanele i-thermos engu-2 litre ingamamentimitha angu-4 empande. Emva kokuphuza itiye kumele kuhlungwe.
Kungcono ukwenza itiye ekuseni, bese uyiphuza usuku lonke, ungeze izithako ezihlukahlukene.
Itiye le-ginger lihle kuma-mugs amancane.
Uma uphuza itiye le-ginger ngaphambi kokudla, khona-ke indlala iyoba encane futhi, ngokufanele, uyodla kancane.
Uma uthanda i-herbal teas, ungakhohlwa ukwengeza ucezu lwe-ginger kwi-teapot, njengoba kuthuthukisa umphumela wamakhambi, ngakho-ke izinzuzo zaleli teyi zizophindwa kabili.
Itiye le-ginger negalikhi libhekwa njengesiphuzo esiphumelele kakhulu sokulahlekelwa isisindo.
Ukupheka kweziphuzo nge-ginger ukuze ulahlekelwe isisindo
I-tea enhle nge-ginger nogalikhi
I-peel bese usika izimpande ezine-cm we-ginger, ama-clove amabili ka-garlic uthathe iziqephu. Beka i-garlic kanye ne-ginger endaweni ye-thermos bese uthele ama-2 amalitha amanzi abilayo, ufune amahora amabili, bese uhamba uphinde uthele futhi ku-thermos. Phuza usuku lonke ngezinkomishi ezincane.
Itiye le-Ginger lokunciphisa nge-orange
Thatha impande engu-2 cm ye-ginger, 1 tbsp. l. i-mint no-1 pinch ye-cardamom bese uwaxuba ku-blender. Ingxube elandelwayo ithulule ilitha elilodwa lamanzi abilayo bese ucindezela isigamu sehora. Ngemuva kokuhlunga, phuza kancane bese wengeza u-85 ml. ilamula kalamula kanye no-50 ml. ijusi le-orange. Ungafaka uju ukunambitha. Lokhu kuphuza kungcono ukuphuza okupholile nokushisa kwehlobo, njengoba kuvuselela.
I-tea emincane nge-ginger no-cowberry
Brew 1 ithisipuni i-cowberry nge-ginger, ubambe itiye ngaphansi kwe-napkin imizuzu engama-30, bese ukhula futhi upholile. Ungafaka uju ukunambitha. Letiyi idakiwe uma kunamanzi amaningi emzimbeni. Kuvame ukusebenza umsebenzi wezinso bese kususa ukuvuvukala emgqeni we-urinary.
Imiyalo yokusetshenziswa kwamanzi okugeza
Ukwelashwa kwamadoda wezinkinga zesifuba
Indlela yokulungisa kahle izitshalo zokwelapha
Isicelo sokudlwengula emithini yomuthi
Yini umzimba wethu oyidingayo uma udonsela kumkhiqizo othize?
Indlela yokugcwalisa amandla futhi njalo uhlale unamandla futhi usebenza
Dropsy Ukwelashwa: izikhambi zabantu
Indlela yokuvimbela intombazane evela tattoo
I-currant ebomvu i-currant ebomvu
Izakhiwo eziwusizo zamazambane
Kungani amantombazane amahle avame ukushiywa yedwa?
Ama-calories we-parmesan ushizi
Kungcono ukugeza phansi okudwetshiwe?
Mask for izinwele kusuka imikhiqizo yemvelo
I-tilapia nge-quinoa nekhukhamba
Ukudla komntwana okufanelekile
Njengoba ngenye indlela ibizwa ngokuthi umthetho wobuthakathaka
Izinsisekelo, imithetho, izimfihlo zobuchwepheshe, izifundo zokwenza izinto
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngosizo lwe-yoga
Ukusetshenziswa kwamaqabunga esihloko esithi "ekwindla" esikoleni nasenkulisa. Izandla ezisetshenziswa ngezandla zomuntu kusuka emaqabunga owomile ekwindla
Indlela yokudweba phakathi nomkhuhlane: lezi zingqinamba ezingu-4 zizokusiza ukuthi ubukeke kahle!